Sale - Myanmar Mega Property Co., Ltd
Modern House For Sale In Bahan Township.
Lakhs MMK $2,700
25’x70’ #နှစ်ထပ်ခွဲတိုက်တစ်လုံး နှင့် 20’x25’ #နှစ်ထပ်တိုက်တစ်လုံး အရောင်း ဗဟန်းမြို့နယ်၊ သာသနာ့ရိပ်သာလမ်း (ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းနှင့်ရွှေဂုံတိုင်လမ်းမကြီးနှစ်ဘက်ပေါက်) ပေ 100’X 60’ (၀.၁၄၀ ဧက) အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ထားသည့် 25’x70’ နှစ်ထပ်ခွဲတိုက်တစ်လုံး နှင့် 20’x25’ နှစ်ထပ်တိုက်တစ်လုံး...
Kandawgyi Tower for sale
Lakhs MMK $2,500
Kandawgyi Tower. Mingalar Taung Nyunt Township.
Location: Kandawgyi Tower, Mingalar Taung Nyunt Township. Floor:7th Living area: 1,375sqft One master bedroom and one single bedromm Fully furnished...
Condos Mega Projects For Sale
7th Mile Condominium လူနေအိမ်ခန်းများကို စတင်ရောင်းချပေးနေပါပြီ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အသည်းနှလုံး ပြည်လမ်းမကြီးပေါ်မှာ တည်ရှိတဲ့ တစ်ခုတည်းသော ၂၁ ထပ်အမြင့်ရှိ 7th Mile Condominium ရဲ့လူနေအိမ်ခန်းများကို ရောင်းချပေးမှာပါ တည်နေရာအနေအထားအရ အချက်အချာကျသလို မြေပိုင်ဆိုင်ကလည်း...
Diamond Inya Palace Condominium Projects For Sale
Diamond Inya Palace Condominium, Mayangone Township.
Diamond Inya Palace Condominium isa33-story residential development in central Yangon, known to be the tallest building in Myanmar....
ရွှေမိုးကောင်း ကွန်ဒို အရောင်း
Shwe Moe Kaung Condo, Moe Kaung road, Yankin Township, Yangon.
ရွှေမိုးကောင်း ကွန်ဒို အရောင်း Location: ရွှေမိုးကောင်း ကွန်ဒို ၊ မိုးကောင်းလမ်းမ ၊ ရန်ကင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၇ လွှာ ( အလှည့် (အရှေ့)) အကျယ်အဝန်း – 1570...
Spacious Condo For Sale In Golden Valley
Lakhs MMK $5,600
Golden Valley, Inya road, Bahan Township.
Spacious Condo For Sale In Golden Valley သံလွင် ကွန်ဒိုမီနီယမ် အလွှာမြင့် View ​ကောင်း ကွန်ဒိုခန်း ရောင်းရန်ရှိသည် Location: Golden Valley, Inya road, Bahan...
San Chaung Garden Residence For Sale(Pagoda View Tower)(Pagoda View Tower)
Lakhs MMK $5,250
San Chaung Garden residence, San Chaung Township, Yangon Township.
ကွန်ဒိုရောင်းရန် Location: San Chaung Garden residence, San Chaung Township, Yangon Township. Floor: 10th floor (Pagoda View Tower) Living area: 1,300sqft...
The GEMS Garden Condo For Sale ( ကွန်ဒို ရောင်းရန်)
Lakhs MMK $2,400
The GEMS Garden Condo,Thazin street, Lane of Yangon-Insein road, Hlaing Township.
Location: The GEMS Garden Condo,Thazin street, Lane of Yangon-Insein road, Hlaing Township. Floor: 20th floor (Pool view, Inya view, Shwe...
TOPAZ Condominium for sale
Lakhs MMK $1,600
TOPAZ Condominium, ရန်ကုန်မြို့၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ဥဿဖယားလမ်းရှိ Condo
(ရန်ကုန်မြို့၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ဥဿဖယားလမ်းရှိ Condo) အကျယ် 1210 sqft တိုက်သက်တမ်း ၃ နှစ် ခြင်လုံဇကာ ၊ စတီးသံပန်း တအီမ်လုံး တပ်ပြီး၊ မီးပြတ်လျှင် မီးလင်းရန် auto inverter and...
Lakhs MMK $3,500
Khattar Street, San Chaung Township.
Condo for sale in San Chaung Township Location: Khattar Street, San Chaung Township. Floor: 3rd floor Living area: 2,000sqft Three...
Royal Maung Bamar Condo for sale
Lakhs MMK $3,900
Royal Maung Bamar condo, Lane of Pyay Road, Hlaing Township
Location : Royal Maung Bamar condo, Lane of Pyay Road, Hlaing Township (in Yangon, Pyay Road ,6 1/2 mile) (အိမ်ခန်း...
Nawarat Condo for sale ( ​အရောင်း)
Lakhs MMK $2,000
Nawarat condo, Nearby Hledan, Kamayut township.
Location: Nawarat condo, Nearby Hledan, Kamayut township. Floor: 1st floor Living area: 1,360sqft (အကျယ်အဝန်း) Master Bedroom (1), Double Bedroom (1),...
Yawmingyi condo for sale (အရောင်း)
Yawmingyi condo, Dagon Township.
Location: Yawmingyi condo, Dagon Township. Floor: 4th floor Living area: 1,900sqft (အကျယ်အဝန်း) Two master bedrooms and one single bedroom Fully...
Lakhs MMK $20,000
South Dagon Industrial Zone, South Dagon, Yan
ရန်ကုန်တိုင်းတောင်ဒဂုံမြို့နယ်တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုန်မော်လမြိုင်လမ်း အကျယ်ပေ 180×120 အကျယ်အဝန်းရှိ ဂိုဒေါင် အဆောက်အဦး (Steel Structure)ခြံစည်းရိုးခပ်အပြီး။ Zamil Steel Structure ဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားပြီ ရေ၊မီးအစုံ Crane လမ်းကြောင်းပါဝင်သည်။ ​အရောင်း ဈေးနှုန်း – 20,000 သိန်း...
Shine Condo For sale
ရှိုင်းကွန်ဒို ,ဂျိုးဖြူလမ်း ,အောင်ဆန်းကွင်းအနီး , မင်္ဂလာတောင်ညွန့် | ရန်ကုန်တိုင်း
Location: ရှိုင်းကွန်ဒို ,ဂျိုးဖြူလမ်း ,အောင်ဆန်းကွင်းအနီး , မင်္ဂလာတောင်ညွန့် | ရန်ကုန်တိုင်း Floor: 11th floor အကျယ် – 1800 sqft2Master bedrooms and one...